တီကျစ်စာေ⁠မြ⁠ဆွေး ⁠ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ⁠နှင့် သုံးစွဲ⁠ခြင်းရဲ့ အကျိုး⁠ကျေးဇူးများ - Myanmar Farmers' Portal
မိုး⁠လေဝသသတင်း (၂၀၁၉ ခု⁠နှစ်၊ မတ်လ (၂၃)ရက်⁠နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်⁠ပြန်ချက်)
မိုး⁠လေဝသသတင်း (၂၀၁၉ ခု⁠နှစ်၊ မတ်လ (၂၂)ရက်⁠နေ့ ည⁠နေ(၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်⁠ပြန်ချက်)
သြဂဲနစ်ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် စနေ ၊ တနင်္ဂနွေဈေး ပထမဆုံး ဖွင့်လှစ်သွားမည်
စပါးတွင် ငေ⁠မြှာင်⁠တောင်ပိုး ကျ⁠ရောက်ပုံ⁠နှင့် ကာကွယ်⁠နှိမ်နင်းနည်းများ
မိုး⁠လေဝသသတင်း (၂၀၁၉ ခု⁠နှစ်၊ မတ်လ (၂၂)ရက်⁠နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်⁠ပြန်ချက်)
မိုး⁠လေဝသသတင်း (၂၀၁၉ ခု⁠နှစ်၊ မတ်လ (၂၁)ရက်⁠နေ့ ည⁠နေ(၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်⁠ပြန်ချက်)
မြန်မာ့ကော်ဖီ ပြည်ပဈေးကွက်များကို စတင်တင်ပို့
Home စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ တီကျစ်စာေ⁠မြ⁠ဆွေး ⁠ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ⁠နှင့် သုံးစွဲ⁠ခြင်းရဲ့ အကျိုး⁠ကျေးဇူးများ
တီကျစ်စာေ⁠မြ⁠ဆွေး ⁠ပြုလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ⁠နှင့် သုံးစွဲ⁠ခြင်းရဲ့ အကျိုး⁠ကျေးဇူးများ
တီကျစ်မြေဆွေးဆိုသည်မှာ တီကောက်ကလေးများက သဘာဝအလျှောက် မြေကြီး၊ သစ်ရွက်များ၊ သစ်ပင်အကြွင်း အကျန်များ၊ နွားချေး များ၊လယ်ယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စားသုံး၍ ပြန်လည်စွန့်ပစ်ထုတ်လိုက်သည့် ပစ္စည်းများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တီကျစ်စာမြေဆွေး သည် သဘာဝအလျှောက် တီကောက်ကလေးများ စားသုံးပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များအား စုဆောင်းထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း လူတို့ဖန်တီး ပေးထားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တီကောင်ကလေးများကို ပွားများစေကာ မြေဆွေးထုတ်လုပ်သောနည်းက ပိုမိုအသုံးဝင်စေပါသည်။
တောင်သူလယ်သမားတိုင်း လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင် စရိတ်နည်းပြီး လွယ်ကူစွာ ဆောင် ရွက်နိုင်သည့် ပလပ်စတစ်အစ၊ အသုံးပြုပြီး ၀ါးဖရိန်ဖြင့်တည်ဆောက်မည့် တီကျစ်စာမြေဆွေးထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်း စဉ်အား ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိုအပ်မည့်ပစ္စည်းများမှာ ၀ါးလုံး၊ သွပ်နန်းကြိုး(သို့) အုန်း ဆံကြိုး၊ ပလပ်စတစ် (အထူ) ၊ ရေဖျန်းပုံး စသည်တို့ သည် အဓိကကစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ အလျား ၁၀ပေ x အနံ ၄ပေ x အမြင့်၃ပေအရွယ် ဝါးဖရိန်တခုဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အဆို ပါဖရိန်အား ခိုင်ခန့် မှု ရှိအောင်အခေါင်းပိတ်ဝါး (ဝါးယား) များဖြတ်တောက်ပြီးသုံးစွဲသင့်ပါသည်။ ခိုင်ခန့် ပြီးသော ဝါးဖရိန်အတွင်းပလပ်စတစ်အထူစအား ကန်အတွင်းဂွင်ကျဖြစ်စေရန် အောက်ခြေခင်းခြင်း၊ ဘေးကာခြင်းအားဆောင် ရွက်ရပါမည်။
ပလပ်စတစ်တွင်ရေမစိမ့်နိုင်အောင်လိုအပ်သလို ကြိုတင်ချုပ်ထားရပါမည်။ ပလပ်စတစ်ကန်အောက်ခြေအား တစ် ဖက်တစ်ချပ်သို့အနည်းငယ်စောင်းနေအောင် တည်ဆောက်ရပါမည်။ သို့ မှသာ တီကျစ်စာမြေဆွေးအရည်များ စီးစိမ့်မှုကောင်းကောင်းဖြင့် ပြင်ပသို့ထွက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပလပ်စတစ်အခင်း၏ အောက်ခြေတွင် အုတ်ခဲ ကျိုး(သို့ ) ကျောက်စရစ်ခဲအရွယ်တော်များအား ၁ခွဲလက်မခန့် ဖြန့် ခင်းထားရပါမည်။
၎င်းပလက်စတစ်ကန်အတွင်းသို့မြေကြီးနှင့်နွားချေး/ကြက်ချေးများဖြည့်တင်းရပါမည်။ ထို့ နောက် သစ်ရွက်အပိုင်း အစများ ၊စားကြွင်း စားကျန်များ၊ ပေါင်းမြက်များနှင့်လယ်ယာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ထည့်သွင်းရပါမည်။ အစိုဓါတ် ရရှိစေရန်အတွက် ရေဖျန်းပေးရပါမည်။ ရေဖျန်းရာတွင် ထည့်သွင်း ထားသောပစ္စည်းများစိုစွတ်နေရုံလောက်ပဲဖြစ်ပြီး ရေမြှုပ်နေစေရန်အထိ ရေမဖျန်းသင့်ပါ။
ပလပ်စတစ်ကန်တွင်းရှိ ထည့်သွင်းထားသောပစ္စည်းများ ဆွေးမြေ့စေရန် ၄ရက်မှ ၅ရက်အထိစောင့်ရပါမည်။ ပြီးလျှင် ပလပ်စတစ်ကန် အတွင်းသို့တီကျစ်စာမြေဆွေး ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည့် တီကောင် (၁၀၀၀)ခန့်ထည့်ပေးရပါမည်။ အပေါ်မှဂုံနီအိတ်ခွံအဟောင်းများ၊ ဓနိရွက်များ၊ သက်ကယ်ရွက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားရပါမည်။ လုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး အတွက် (၃) လခန့် သာကြာပြီး အညိုရောင်တီ ကျစ်စာမြေဆွေးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သစ်ရွက်၊ ပေါင်းမြက်များနှင့်စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများအား တစ်ပတ်လျှင်တစ်ခါ ထည့်လျှင်လုံလောက်ပါသည်။
ရေကိုတော့ နေ့စဉ်သင့်လျှော်နှုန်းထားအတိုင်း ပတ်ဖျန်းသင့်ပါသည်။
ဝါးဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော ပလပ်စတစ်ကန်ဖြင့် တီကျစ်စာမြေဆွေးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည် ပွင့်လင့်းရာသီ တွင် သစ်ပင်ရိပ်/ အဆောက်အဦးအရိပ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့ ရာတွင်မိုးရာသီရောက်ရှိလာလျှင် ပလပ်စတစ် ကန်အတွင်း ဝင်ရောက်လာမည့် မိုးရေများကြောင့် ကန်အတွင်းရေများပြည့်လျှံကာမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်မည့် တီကောင် များ သေဆုံးသွားနိုင်သည်ကိုသတိပြုရပါမည်။
မိုးရာသီတွင်ပလပ်စတစ်ကန်အတွင်းသို့ မိုးရေများ မဝင်ရောက်နိုင်စေရန် အမိုးတဲတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမိုးတဲကို အပေါ်မှ ပလပ်စတစ်အထူစ(သို့ ) ဓနိ/ သက်ကယ်များသုံးစွဲပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ ပြင် အထူး သတိပြုရမည့်အချက်မှာ မိုးရာသီတွင် တီကျစ်စာမြေဆွေးထုတ်လုပ်မည့် ကန်ထဲသို့ အောက်ရေ များစီးစိမ့် မ ဝင်နိုင်စေရန်အတွက် ရေလွတ်ရာကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် တည်ဆောက် ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တီကျစ်စာမြေဆွေးထုတ်လုပ်သည့် ပလပ်စတစ်အောက်ခြေတွင် တစ်ပေခန့် ရှိသည့် ဝါးလုံးပြွန်တစ်ချောင်း တပ်ဆင် ထားရပါမည်။ အဆို ပါဝါးလုံးသည် ပလပ်စတစ်ကန်အတွင်းထိုးသွင်းထားရာ၎င်းဘေးပတ်လည်မှ တီကျစ် စာမြေ ဆွးအရည်များပြင်ပသို့ထွက်မသွားစေရန် ရွှံ့စေးဖြင့်ခိုင်ခန့် အောင် ဖိကပ်ထားရပါမည်။ ထွက်ရှိလာသည့် တီကျစ် စာမြေဆွေးအရည်များအား သင့်တော်သည့်မြေအိုး/ ပလပ်စတစ် ပုံးများဖြင့် ထည့်သွင်းစုဆောင်း ထားရှိနိုင် ပါသည်။
၃လခန့် ကြာလျှင် ၎င်းပလပ်စတစ်ကန်မှတီကောင်စွန့် ပစ်မြေသြဇာများကို ထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ တွေ့ ရှိချက်များအရ လစဉ်မြေသြဇာ များမထုတ်ယူမီရေဖျန်းခြင်းကို ၂ရက်၊ ၃ရက်ဖြတ်လိုက်ပါက တီကောင်လေးများ ကန်အောက်ခြေသို့ ရောက်ရှိကာ အပေါ်ပိုင်းတွင်ရှိသော မြေသြဇာများကို ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
တီကျစ်စာမြေဆွေး ထုတ်လုပ်သုံးစွဲခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
၁. တီကောင်များကြောင့် မြေကွက်များ/လယ်ယာမြေများတွင် မူလရှိရင်းစွဲ မြေသြဇာများအပြင် တီကောင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ပိုမိုထက်သန်လာစေခြင်း။
၂. ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရန် မသင့်တော်လောက်အောင် ပျက်စီးနေသောမြေများအားပြန်လည်စိုက်ပျိုးနို င်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
၃. တီကောင်များ သေဆုံးခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ကြွင်းများဖြင့်လည်းကောင်း မြေသြဇာဆီထက်သန်စေခြင်း။ (တစ်ဧကလျှင် တီကောင် ၅သိန်းခန့် ရှိ)
၄. တီကောင်များသည် အမျိုးအစားအလိုက် မြေမျက်နှာပြင်အထက်မှအောက်၊ အောက်မှအထက်သို့အပြန်အလှန်သွားလာကျက် စားဖြင့် မြေဆီလွှာအလိုက်မြေသြဇာထက်သန်မှုကို မျှခြေဖြစ်စေခြင်း။
၅. မျိုးပွားမှုနှုန်းလျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းမှုအား အချိန်တိုအတွင်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
၆. တီကောင်စွန့် ပစ်မြေဆွေးများအား လေ့လာချက်အရ အရေးကြီးသောမြေချဉ်ငံသည် PH7ဝန်းကျင်တွင် ရှိသဖြင့် အပင်များရှင်သန်မှု အတွက်များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း။
၇. တီကောင်စွန့် ပစ်မြေဆွေးအား သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဓါတုပစ္စည်းကင်းလွတ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သီးနှံများထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ သီးနှံများ ဈေးကောင်းရနိုင်ခြင်း၊ သီးနှံများ အရသာပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း။
၈. တီကောင်စွန့်ပစ်မြေဆွေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အရင်းအနှီးနည်းပါးခြင်း၊ တောင်သူတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
၉. တောင်သူများထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှု တိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာသည့်အချိန်တွင် ဓါတုမြေသြဇာသုံးစွဲမှုလျော့ပါးလာ ပြီး နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ များစွာ သက်သာလာစေနိုင်ပါသည်။
Source by – လယ်/ဆည်
စပါးကို အစိုတမန်း⁠ပြင်⁠ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အ⁠စေ့ချစိုက်ပျိုး⁠ခြင်း
Pissaya AdminMar 23, 2019
Pissaya AdminMar 22, 2019